मनोरञ्जन Archives - Page3of 88 - Tufan Media News
Tuesday October 20, 2020 |
एजेन्सी । बलिउडका दबंग खान सलमान खानले आफ्नो एक्स गर्लफ्रेन्डद्धए एश्वर्य र कट्रिनाको बारेमा सार्वजनिक ठाउँमै गरे आफुसंग सम्बन्ध रहंदा भएको कृयाकलापहरु सार्वजनिक । उनले यी दुई प्रेमीकाहरु आफ्नो जीवनको सबैभन्दा महत्वपुर्ण पात्रका रुपमा रहेको बताउँदै जब यी दुईसंग आफु प्रेममा रहंदा गरिएको कुराहरु सुनाए तब सुन्ने सबै एकअर्...
नौमती बाजासहित पल र रियाशा भब्य सेटमा बेहुला बेहुली
काठमाडौ/ नायक पल शाह र मोडल रियासा दाहाल बीच सुटुक्क बिबाह भएको छ । उनीहरुको सुटुक्क बिबाह भएको हो । मिडिया पुग्दा पल र रियासा भब्य सेट सहित नौमती बाजा नाचिरहेका थिए । बेहुला बेहुलीको भेषमा देखिएका थिए सोहि क्रममा पत्रकारले रियासलाई कस्तो हुदै छ बिबाह भनेर प्रश्न गर्दा उनले यो दोश्रो बिहे हो मेरो भनेपछि पल अकमक्क भए । ...
यो घरमा के भयो यस्तो ? स्थानियाहरुको भागाभाग, लागे नलागेका संगै राख्दा ठुलै लफडा पर्यो हेर्नुस यतिसम्म भयो
काठमाडौ । पछिल्लो समय नेपाल लगायत बिश्वनै त्रसित छ किनकि कोरोना भाईरसले सबैलाई घरमा बस्न लगाएर आफू बिश्व भ्रमणमा निस्किएको छ भन्दा फरक पनि नपर्ला ? कतिपय देशमा त अझैपनि लकडाउन र निषेधज्ञानै रहिआएको छ भने कसैले संक्रमितको संख्या हेर्दै यसलाई तोडदै पनि गएका छन । हो आज हामी कुरा गर्दैछौ हाम्रै देशको राजधानी काठमाडौ खरीबोट...
बिष्णु माझि किन देखिदैनैन बाहिर ? चर्चित गायकले खोले खास भित्री रहस्य..भिडियो हेर्नुहोस
काठमाण्डौ , विष्णु माझीको जन्म चापाकोट, स्याङ्जा जिल्लामा भएको थियोे । उनी हाल नेपालको चर्चित तथा उत्कृष्ट लोक गायिकाहरू मध्ये एक हुन् साथै उनी नेपालमै सबै भन्दा बढि पारीश्रमिक लिएर गीत गाउने महँगी गायिका हुन । उनी नेपाली संगीत जगतमा बिगत १५ /१७ वर्ष देखि सक्रिय छिन । नेपाली संगीत जगतमा उनको नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा ...
कान्छी श्रीमती भएर भित्रिएका नेपाली यी ८ नायिका
धर्म शास्त्रका अनुसार बिहे गरेर बाँधिएकाे जाेडि कहिल्यै छुट्न हुदैन भनिन्छ, तर कुमारी वा कुमार नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अहिलेकाे समाजमा हराइसकेकाे छ । दोस्रो विवाह गर्नु अहिलेकाे समयमा खासै ठूलाे असर पुराउछ जस्ताे देखिएकाे छैन् । धेरै नेपाली अभिनेत्रीहरुले पहिले विवाह गरेर छुट्टिसकेका श्रीमान् रोजेका छन् भने कोही श्र...
१४ वर्षिया फुच्ची फिगरका कारण भाइरल….तस्बीर हेर्नुहोस
काठमाडौ । कसैलाई प्रकृतिले बरदान नै दिएको हुन्छ । उसलाई न उमेरले नै छेकेको हुन्छ । अहिले अलेक्जेन्डरो नाम गरेकी एक फुच्ची केटी खुबै भाइरल छिन् । उनी भाईरल हुनुको कारण हो उनको फिगर । तस्बिर देख्दा धेरैजसोलाई दिमागले धोका दिन्छ । बच्चा भएर पनि उनको फिगर यस्तो छ कि लाग्छ उनी कुनै अर्धबैँसे युवती हुन् । तर, होइन उनी हुन् ...
छिनमै रिसाउछिन छिनमै हाँस्छिन जिरो फिगरमा सबै लोभिन्छन (भिडियो)
काठमाडौँ (उक्त भिडियो हेर्नु भप्दा पहिला टिकटक बारै थोरै चर्चा गरौ) टिकटक नेपालमा त्यति नै चर्चित र लोकप्रिय छ, जति फेसबुक । टिकटकको यो लोकप्रियता छ महिनायता झन् बढ्दो छ । ‘लकडाउन’ले घरभित्रै रहँदा धेरै इन्टरनेट प्रयोगकर्ताका लागि टिकटक समय गुजार्ने रमाइलो माध्यम पनि बन्यो । यसको लोकप्रियता त्यसयता चुलिएको छ । टिकटकको...
आँचल शर्माको दशैं गीत सार्वजनिक (भिडियो)
काठमाडौँ। हिन्दुहरुको महान चाड दशैँ नजिकिए संगै दशैं तिहार बिसेष गीत भिडियो सार्वजनिक हुने क्रम बढ्न थालेको छ। यसै क्रममा सुजन तिगेला लिम्बु र मेलिना राईको स्वरमा रहेको दशैं तिहार गीत भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ। मिलन चाम्सले निर्देशन गरेको भिडियोमा अभिनेता आर्यन सिग्देल,आँचल शर्मा,सुजन तिगेला लिम्बु,रेबिका गुरुङ र क्षित...
रातारात भाईरल बन्यो राजेश हमालले खेलेको लोक दोहोरी गीत (भिडियो )
काठमाडौं – अभिनेता राजेश हमालले अभिनय गरेको म्युजिक भिडियो ‘मञ्जरी’ सार्वजनिक गरिएको छ । यो लोकदोहोरी गीत सोमवार युट्युबमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । देवी घर्ती र प्रकाश पराजुलीको स्वर रहेको लोकदोहोरी गीतमा नवराज पन्तले शब्द रचना गरेका छन् । साथै गीतमा गायक पराजुलीले नै संगीत सिर्जना गरेका छन् । गीतमा संगीत संयोजन विश्...
दुई वर्षदेखि अभिनेत्री श्वेता खड्काले चलचित्रमा काम गरेकी छैनन् । पछिल्लो पटक आफैंले निर्माण गरेको चलचित्र ‘कान्छी’ मा देखिएकी उनले गएको वर्ष एभरेष्ट सूर्य बोहराको ‘हेल्लो जिन्दगी’ साइन गरेकी थिइन् । तर, घाँटीमा ट्यूमर देखिएपछि उनले यो चलचित्र गर्न सकिनन् । अहिले आफ्नो व्यापार व्यवसायमा ध्यान दिँदै आएकी उनी एक नयाँ चलच...
कुखुरीलाई ब’लात्का’र गर्ने व्यक्तिलाई ३ वर्ष जे’ल,
गायिका अञ्जु पन्त भन्छिन “छोरी नै बाँच्ने साहारा(भिडियो)
रमेश प्रसाईँको बस्यो माया, चोर्न सफल भईन् यी गायिकाले रमेशको मन?
असई र प्रहरी जवानलाई घेराबन्दी गर्दै फ’ रु वाले हा ने’ र ‘ ह’ त्या गरेको खुलासा
त्यसपछि श्रीमतीले गरेको कुरा श्रीमानले झ्यालबाट भिडियो खिच्दै थिए
२६ बर्षकै उमेरमा पतिले छोडेर गएपछि दु’धे बालक सहित 22 बर्षे युवती रु दै मिडियामा(भिडियो)
प्रहरी जवान साउदको श’व मोहना नदीमा भेटियो
अनौठो तरिकाले नेपालको प्रचार गर्ने भारतीय महिला पहिलोपटक मिडियामा, भन्छिन् “म नेपाली हो” (भिडियो सहित)
असई गोविन्द बिकको ह’त्यामा संलग्न गिरोह प’क्राउ , “असईले त’स्करी रोक्न खोजेपछि ह’त्या गरेर मोहना नदीमा बगाईदियौँ’
झापामा यस्तो कहालीलाग्दो घ’टना ! २१ वर्षिया चेलीकाे पुछियो सिन्दुर, ३ वर्षको छोरीले ‘बाबा खै’ भन्दा मन थाम्न सक्दिनन् (भिडियो हेर्नुस्)